Tue, Apr 24, 2018 | 21:49:22 NST
गाउँमा दिदीबहिनीलाई दर खाने अघिल्लो दिनसम्म पनि घाँस काट्न र धान, कोदो गोड्दागोड्दै फुर्सद छैन । तर शहरमा दिदीबहिनीलाई तीज आउनु महिना दिन अघि देखि नै महङगा पहिरनमा सजिएर कार्यक्रम गर्न भ्याइ नभ्याइ छ । कति फरक छ गाउँ र सहरको तिज ।
मलेसियामा ए वान कम्पनी धेरै छन् । त्यसैले नेपाल सरकारले मलेसिया पठाउनुभन्दा अगाडी नै सोच्नुपर्छ । कमाउने दाउमा व्यावसायीले यस्ता कुरा ख्याल गर्दैनन् ।
पछिल्लो समय सुदुरपश्चिममा गौरा पर्वको रौनक कम हुँदै गएको छ । सांस्कृतिक चाडमा पहिलेको भन्दा छाडा प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तै हो भने हाम्रा सांस्कृतिक चाड बिस्तारै लोप होला जस्तो लाग्यो । त्यसैले यसप्रति चाड मनाउनेको ध्यान जाओस अनि प्रचारप्रसारमा सञ्चार माध्यमले पनि प्रयास गरुन् ।
गाडी दुर्घटना गराउने चालकलाई कडा कारवाही गर्ने भन्ने सुन्दा त खुसी लाग्यो । चालकलाई अफ्ठेरो पर्ने गरी बाटोमा हिड्ने पैदल यात्री, छाडा छाडिएको जनावर, अनि ट्राफिक लाइटको बारेमा चाँही सरकारको ध्यान दिन जाँदैन कुन्नी ।
उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आफनो चीन भ्रमण सफल भएको भन्नुभयो, तर भ्रमण के आधारमा सफल अनि कसका लागि सफल ? नेताका लागि कि नागरिकका लागि ?
अब बाबुराम भट्टराई जी ले १० खर्ब दिने रे । मुखले ठिक्क पार्न हाम्रा नेताले सा¥है जानेका छन्, जो सत्तामा छ उसलाई काम गर्न पनि नदिने, आफू पनि माखो नमार्ने, गफले सारा दुनियाँ जित्ने पनि उनीहरु नै हुन्छन् यहाँ ।
हैन के छ भारतसँग ? जुन सरकार गठन भएपनि प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै भारतकै भ्रमण गर्नुपर्ने । भ्रमणको कुरा गर्नुभन्दा तराईका बाढी पीडितका लागि केही सोच न ।
उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकामा गर्भवती सृजना कार्कीलाई ६ महिनादेखि दाम्लोमा बाँधेर राख्दा अरु बेला हरेक कुरामा अधिकार खोज्ने महिलाले आज के गरे खै ? के उहाँको घरमा कोहि महिला छैनन उहाँको अधिकार बुझिदिने ? मानसिक अवस्था ठिक नभएकी महिलालाई बाँधेर राख्दा उहाँको समस्या समाधान हुन्छ र ? खै त यस्तो बेलामा महिलाको अधिकारका कुरा गर्ने अधिकारवादी ? उहाँलाई जति सक्दो छिटो उद्धार गरी उपचार गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
बाटो बिग्रेको विरोधमा बाटोमा धान रोपाइँ गर्नुको साटो रोपाइँ गर्ने व्यक्ती मिलेर बाटो मर्मत गरेको भए के बिग्रन्थ्यो ? हामी नेपालीले विरोध गर्न जानेका छौं, काम गर्न जानेका छैनौं ।
मधेस आन्दोलनमा मारिएकाका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय गरेछ । अनि आन्दोलनमा मारिएका प्रहरीका परिवारलाई चाहिँ के दिने प्रधानमन्त्री ज्यू ?
भुकम्प र बाढी पहिरोले सर्वस्व गुमाएकाहरुलाई जम्मा २ लाख मात्रै अनि आन्दोलनमा मारिएकाहरुलाई चाहिँ १० लाख ?
नागरिकलाई न त स्वीटजरल्याण्ड चाहिएको छ न त सिंगापुर । गरिखाने वातावरण बनाइदिए पुग्छ । अनि त नागरिकले तपाईंको विश्वास गरिहाल्छन नी ।
घर राम्रो हुन आफू राम्रो हुनुपर्छ र समाज राम्रो हुन घर राम्रो हुनुपर्छ तब मात्र देश राम्रो बन्छ । नेपालको सबैभन्दा ठुलो र पुरानो लोकतान्त्रिक दल भित्रै लोकतन्त्र खोज्दै उसैका भात्री संगठनका विद्यार्थी आमरण अन्सनमा बसेका छन् । यो कांग्रेसका लागि कति लज्जा को विषय हो ? यसतर्फ काँग्रेस नेतृत्वको ध्यान बेलैमा जानू जरुरी छ ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको नौ महिना पछी देउवाको पालो , यो नौ नौ महिनामा सुत्केरी हुने सरकारबाट नागरिकले के आशा राख्ने ?
सिमाना र देशप्रति माया मधेशी नागरिकमा धेरै रहेछ । नेपाली भूमि डुबानमा पार्न जवरजस्ती बाँध बनाउन खोज्ने काम रोक्ने सच्चा नेपालीलाई लाख लाख सलाम । नारिकलाई रुपरंग भेषभुषा वा लवजका आधारमा विभेद नगरियोस् ।